OED COVID-19 | Iska diiwaangeli dabaajiga tooska ah ama hel kaarka…
Iska diiwaangeli dabaajiga tooska ah ama hel kaarka bangiga
Lacag bixinta Koowaad
Dhammaan sheegashooyinka cusub, lacag bixinta koowaad waxaa caadi ahaan lagu soo diraa jeeg warqad ah.
Iqtiyaarada lacag bixinta
Waaxda Shaqada waxay ku bixisaa faa’idooyinka koronto ahaan midkood Bangiga Mareykanka ReliaCard® Visa kaarka bangiga ama dabaajiga tooska ah. Haddii aadan codsan dabaajiga tooska ah, waxaa laguu soo dirayaa ReliaCard®.
Dabaajiga tooska ah
Iyo dabaajiga tooska ah, waxaan si koronto ahaan u wareejinaa lacag bixinta faa’idadaada isbuuclaha ee akoonkaaga jeega ama keydinada ee bangigaaga, midowga deynta, ama keydinada ama amaahda. Si loo codsado dabaajiga tooska ah waxaad u baahaneysaa lambaradaada bangiga iyo akoonkaaga.
Si aad u codsatid:
Isticmaal Nidaamka Sheegashada Onleenka oo ka xulo “dabaajiga korontada ah,” dalabka guud xulo Geli warbixintaada, ama
Daabac Ansixinta Doomka Dabaajiga Korontada ah oo noo soo dir inaga.
Waxaad ka raadin kartaa foomka Ansixinta Dabaajiga Tooska ah onleenka ah ee Foomamka.
Muhiim ah: Waaxda Shaqada ma lahan wax xakameyn ah oo dhinaca lacag bixinta korontadaada lacag bixinta kadib markii la sameeyay.
Markii aad iska diiwaangelisid dabaajiga tooska ah waxay qaadataa illaa 2 isbuuc in lagu xaqiijiyo warbixinta akoonkaaga. Inta lagu jiro muddada xaqiijinta, waxaad ku heleysaa lacag bixin jeega warqada. Gudbinta codsiyada dheeraadka ah oo dabaajiga tooska ah, ka hor xaqiijinta nidaamka intaan la dhameystirin, waxay ku sababeysaa in nidaamka bilaabo nidaamka xaqiijinta cusub iyo saxitaanka daahitaanka dabaajigaaga tooska ah.
Iyo Bangiga Mareykanka ReliaCard® Visa, waxaan ka dhignaa dabaaji lacag bixinadaada oo kaarka bangiga lacagta horay loogu shubay. Kaarkaan waxaa lagu isticmaali karaa meel walba oo kaararka Visa laga ogolaado. Waa inaanan laguugu dalacin qidmada oo isticmaalida ReliaCard®.
Fadlan ka dhowr kaarka boostada. Waxay ku imaaneysaa bashqad cad oo ay la jiraan ciwaanka soo celinta Indianapolis, Indiana. Ha iska tuurin, xittaa haddii aad iska diiwaangelisid dabaajiga tooska ah. Haddii dabaajigaaga tooska ah uu u guuldareysto sabab walba, waxaan si toos ah dib ugu celinaa lacag bixinta oo ReliaCard®.
Markii aad heshid kaarkaaga, soo wac lambarka taleefonka bilaashka ee ku yaalo kaarka si looga shaqeysiiyo. Waxaad ka geli kartaa warbixinta akoonkaaga ReliaCard® onleenka ee ReliaCard® ama adiga oo ka soo wacayo xaruntooda adeega macmiilka 1-855-279-1270.
Waaxda Shaqada marnaba kuma weydiineyso inaad bixisid lacag helitaanka faa’idooyinkaaga shaqo la’aanta.
Waaxda Shaqada ma isticmaasho shirkad kaloo banaanka ah si ay kuugu helaan faa’idooyinkaaga. Dhammaan isgaarsiinada ku saabsan faa’idooyinkaaga waxay si toos ah uga imaanayaan Waaxda Shaqada, ma ahan shirkad banaanka ah. Haddii lagu weydiiyo inaad lacag soo dirtid ama aad lacag bixisid si aad u heshid faa’idooyinkaaga, ka taxadar in midaan ay qiyaano tahay.
Haddii qof ku weydiiyo inaad lacag u soo dirtid si markaas aad u heshid faa’idooyinkaaga, la soo xiriir oregonconsumer.gov ama soo wac 877-877-9392 si aad u wargelisid diyaano.
Haddii aad heshid imeel ama fariin qoraal aad u maleysay inay malaha ka timid qiyaanoole oo kuusheegay inuu yahay Waaxda Shaqaalaha ama sharci dajiye, marka koowaad, ha taaban ciwaano walba oo ha u jaabin. Waxaad ku xareyn kartaa cabasho oregonconsumer.gov ama soo wac 877-877-9392.
Codsashada Ka dhaafida Lacag bixinta dheeraadka ah
Site last updated: Bisha Lixaad 29, 2022